5 Of The warbaahinta Shopping Best In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Of The warbaahinta Shopping Best In Europe
Marka dibadda u safraya, waxaan oo dhan jecel fursad ay ku shopping! Waxa uu dareensan yahay kala duwan ee dal kale, ma waxaa? Marka ay timaado in Europe, shopping ma niyad jabin. Ma aha oo kaliya ma u leeyihiin magaalooyinka shopping caan ah sida London iyo Milan, oo waxa uu xitaa uu leeyahay suuqyada outlet badan bixiya dhimis weyn waddada sare si ay noocyada raaxada dhamaadka sare. Hoos waxaan si faahfaahsan 5 Of The warbaahinta Shopping Best In Europe.
Ladies, aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in ay waxoogaa ka dhaadhicinaya in uu ka dhaadhiciyo aad lab safraya si ay qayb, laakiin yabooha sumadaha naqshadeeye at qiimaha dhimay, waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu dadaalka. Oo haddii hubby ama saaxiib aan ku qanacsanahay, tuulooyinka outlet guriga waa in badan oo ka mid ah dukaamada halkaas oo ay fadhiisan karaan oo soo jeeda dadka u qurux badan halka aad dukaanka ilaa aad da'a!
Outlet wuxuu ku yaalaa ku saabsan 30 km ka Florence iyo si fudud loo gaari karo tareen ama baabuur ama bas ku saabsan nus saac. The Outlet Designer Barberino waa tuulada shopping ah: oo ku yaalla meel magaalada hareeraheeda ah, waxay u muuqataa magaalo yar oo la badan “guryo” dhinac in la baryi dukaamada. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka outlet ah sida Outlet ku Designer Barberino shaki la'aan waa fiirsashada sare ee dukaamada of noocyada waaweyn ee aagga oo kooban.
Waxaad ka heli doontaa noocyada caanka ah Talyaani iyo kuwa caalamiga ah sida Prada, Dolce & Gabbana, Cavalli, Patrizia Pepe, Michael Kors, Pinko, Furla, laakiin kuwa badan oo caalami ah sida Garo, Twin Set, sinnayn, Hugo Boss, Nike, iyo Adidas, in la magacaabo dhowr ka mid ah kuwa ugu caansan. Haddii aad ka baqaysid inaad ku hesho lumay iyo lumin brand aad ugu jeceshahay, marayay bartamaha suuqa waxaad ka heli doontaa lacag la'aan ah, map faahfaahsan Outlet ah.
Maxaad aan go'aansanno in aan this dar in warbaahinta Shopping our Best in Europe? Dukaamada The yabooho dhimis ah 30 si ay u 70% marka la barbar dhigo qiimaha lagu iibiyo ee dukaamada caadiga ah iyo inta badan waxaa jira dallacaadaha more gaar ah! Haddii aad jeceshihiin magac weyn, aad halis u ah oo loo helo qaar ka mid ah heshiisyo weyn oo kaliya, Boobka dharka ama qandi, ama labada nin in kabaha aad barbaro leh qiime sare ee dukaanka magaalada.
Bicester Village, Boqortooyada Ingiriiska
Bicester Village leeyahay wax kasta oo aad raadinayso marka ay timaado dhimay shopping naqshadeeye. Waxaan ku daray in Bicester warbaahinta our Shopping Best in liiska Europe sida ay tahay mid ka mid ah dalal tafaariiqda raaxo top UK. Waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan waa meelaha dalxiiska in England ee dadka ajnebiga ah, oo ay la socdaan Buckingham Palace iyo Tower of London.
Waa ma aha oo kaliya dadka dalxiisayaasha, in kastoo. tifaftirayaasha Fashion iyo saxafiyiinta waa visitors si joogto ah iyo si waa Kate Middleton, Duchess of Cambridge. Waxay ahayd mar lagu arkay iibsato dhar hurdo, waayo, Prince George. Haddii aad tahay boqornimada ama editor Vogue a, kuwaas oo ma jeela baayactan ah?
Baro waayo-aragnimo u gaar ah shopping oo ay goob-hawada furan at La Vallee Village dhow Paris. Waxaa jira in ka badan 110 yaalaaan dunida fashion caalami ah oo caan ah. Waxa kale oo jira noocyada nololeed bixiya ay ururinta xilli hore qiimaha dhimay, sannadka oo dhan.
La Vallee Village waa mid ka mid ah warbaahinta Shopping Best in Europe. Waxay hoy u tahay noocyada qiimaha iyo waxay bixisaa xulashada adeegyada si taxadar leh si loo hubiyo in curated guests raaxaysan maalin ah la ilaawi karin ka soo.
Village ayaa waxay hoy u tahay in ka badan 110 yaalaaan of noocyada qiimaha ay ku jiraan: Armani, Calvin Klein, Carven, Charles Tyrwhitt, CH Carolina Herrera, Tababare, Diane von Furstenberg, Fred Perry, Furla, Garo, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, Michael Kors, Moncler, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, Kooples The, Tumi, UGG, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & Voltaire iyo qaar badan oo.
Serravalle Designer Outlet, Serravalle dhow Milan, Italy
Liiska warbaahinta Shopping Best in Europe kama tegi karo baxay Milan! Haddii aad raadinayso shopping dhamaadka sare, Milan inta badan waa at dusha sare ee liiska badan dadyowga. Ma ogtahay inaad ka heli kartaa beec on shopping aad ku tilmaamay mid aad u? Booqo Serravalle Outlet Designer for dhimis on noocyada fashion wadada weyn iyo sare.
Ku yaalaa wadnaha ah oo kuraha GAVI. Waxay ku xiran by adeeg maalmeedka Slaam baska ka Milan (safarka qiyaastii waqti. 50 daqiiqo). Serravalle Outlet Designer waa Dukaanka ugu weyn Yurub ka go'an in ay dunida ka mid ah shopping raaxo. Inside, marka lagu daro 11 Meelaha dhadhanka. Waxaa ka mid ah meheradaha iyo makhaayadaha. Shopping ku caashaqay ka heli doontaa in ka badan 230 dukaamada. All buuxiyeen noocyada ugu wanaagsan ee caalamiga ah, oo lagu daray magaca Talyaani weyn sumadaha naqshadeeye oo ay ku jiraan Casadei, Iceberg, iyo Missoni.
Ku raaxayso booqasho uu ku Wurzburg, mid ka mid ah magaalooyinka dalka Jarmalka oo ah da'da weyn site UNESCO Heritage World. Baadh ay goobaha taariikhiga iyo taxadiri markaas qabsado ka beec ugu wanaagsan ee degmooyinka shopping Wertheim Village Outlet. tuulada Tani shopping outlet ee Wurzburg faanaa weyn a 110 shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah! tuulada ay tahay oo keliya 50 daqiiqo ka Frankfurt ama 60 Minutes ka Nuremberg. Waxaa kaloo jira dhowr makhaayadood in ay sii hurinayaan aad aad shopping!
Hel tayo sare leh fashion naqshadeeye Yurub, alaabta guriga ama guriga accessories waayo, 30% si ay u 60% yar. Maalmihii samaynta gubanaya dheeraadka ah iyo xiliga la soo hara waxaa dheer tagtay. dukaamada outlet Factory ayaa hadda si caadi ah ka mamnuuceen id ah picturesque yar magaalooyinka dhexdhexaad ah. Sidoo kale ku dhawaad magaalooyinka iyo, Waayo, kulligood aad u ogaato, albaabka xiga waxaa laga yaabaa in xaq u! Cuno iyo qof kasta oo ah kiishad cusub?
Frankfurt inay Tareenadu Wurzburg
Nuremberg in Tareenadu Wurzburg
Stuttgart in Tareenadu Wurzburg
Bonn in Tareenadu Wurzburg
Ready si aad u hesho boodi on tareen safarka shopping ee Meyeydaan wax ka? Trust Save A tareenka si aad u hesho tigidh waxaa si degdeg ah oo aan wax fiiga qarsoon. (lacag dheeraad ah shopping!)
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Of The warbaahinta Shopping Best In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-shopping-outlets-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#naqshadeeyayaasha #fashion #dukaamada shopping